प्रिती जिन्टा र यूवराज सिंह बिच के थियो सम्बन्ध ? | Nepal Desh
Home मनोरञ्जन प्रिती जिन्टा र यूवराज सिंह बिच के थियो सम्बन्ध ?
बलिउड नायिका प्रिती जिन्टाको सम्बन्ध क्रिकेटर यूवराज सिंहसँग के थियो ? के उनीहरु प्रेममा थिए त ? भारतीय संचारमाध्यममा यी दुइको विषयमा विभिन्न खालका प्रेम सम्बन्धको समाचार नआएका होइनन् । तर, नायिका प्रिती जिन्टाले बारम्बार यस बिषयमा स्पष्टिकरण दिइरहेकी छिन् ।
फेरि, यो बिषयमा प्रितीले आफ्नो मुख खोलेकी छिन् । एक पत्रिकामा यूवराजसँगको सम्बन्धको खबर आएपछि पि्रती आक्रोशित भएकी छिन् । उनले ट्विटरमार्फत मलाई कतीपटक भन्नुपर्छ कि यूवराज सिंह र मविच कुनै सम्बन्ध थिएन भनेर भनिराख्नुपर्छ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेकी हुन् ।
उनले आफूले यूवराजसँग डेट गर्ने कुनै सोच पनि नराखेको लेखेकी छिन् । पि्रतीको आक्रोश यतीमा मात्र सिमित छैन । उनले फेरि लेखेकी छिन्-‘यस्ता कमेन्ट धेरै नै घिनलाग्दा हुन्छन् । यस्तो समाचार लेख्न बन्द गर्नुहोस् ।’
प्रितीको यो आक्रोशले फेरि एकपटक उनलाई चर्चामा ल्याइदिएको छ । लामो समयसम्म प्रिती र उद्योगपति नेस वाडियाविच सम्बन्ध थियो । गतबर्ष भने प्रितीले आफूमाथि हिंसा गरेको भन्दै वाडियामाथि मुद्दा हालेकी थिइन् ।